भाइरल बन्न लोकगीतको मर्म र शैली बिगार्न पाइदैन : सविन आचार्य, गायक « Janata Samachar
पूर्वी नेपाल पाँचथरका सविन आचार्य नेपाली लोक गीत र दोहोरीमा परिचय बनाउँदै गरेका नाम र स्वर हुन् । निकै दुःख र संघर्ष गरेर लोकगीत क्षेत्रमा उदाउँदै गरेका आचार्य यति बेला लाइभ दोहोरी गाउनमा भ्याइनभ्याइ छन् । दोहोरी साँझमा गाएरै धेरै श्रोता र दर्शकका प्रिय बन्न थालेका आचार्यका केही गीत रेकर्ड समेत भएका छन् । उनको पछिल्लो गीत ‘मनैमा पीर छ नि’ ले अहिले विस्तारै चर्चा पाउँदै गएको छ । उक्त गीतमा उनलाई गायिका देविका घर्तीले साथ दिएकी छन् ।
प्रस्तुत छ उनै दोहोरी गायक आचार्यसँग जनतासमाचारले गरेको छोटो कुराकानी :
लोकगीतलाई अझै हेलाको दृष्टिले हेरिन्छ । युवाहरुमा खासै लोकगीत सुन्ने र गाउने रुचि देखिँदैन । तपाईँ किन गाउनु हुन्छ ?
–म सानैदेखि गीत खूब गाउँथे । गाउँमा सहरबाट आउने दाजु, काकाबुबाहरुले क्यासेटमा लोकदोहोरी गीत नै लिएर आउनुहुन्थ्यो । हामी त्यहि सुन्थ्यौँ र गाउँथ्यौँ । त्यसैले सानैदेखि लोकगीत नै मन पर्ने र गाउने गर्न थालियो । अरु गीत पनि राम्रा हुन्छन् तर मलाई लोकगीत नै मनपर्छ । गाउँदा आफैंलाई पनि आनन्द लाग्ने भएकाले म लोकगीत नै गाउँछु ।
गायन क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ? यहाँसम्म कसरी आइपुग्नुभयो ?
–मैले सक्रिय भएर गाउन थालेको तीन वर्ष जति मात्र भयो । शुरुशुरुमा घरपरिवारलाई गायन क्षेत्र मन पर्दैन थियो । त्यसैले राम्रोसँग पढ यता नलाग भन्नुहुन्थ्यो । तर म घरबाट भागेर काठमाडौं आउँथे फेरि केही गर्न नसकेर फर्किएर जान्थेँ । कति पटक यस्तै गरेँ । अनि पछिल्लो पटक चाहिं अब केही गर्नैपर्छ भन्ने सोचेर आएँ । शुरुमा त कहाँ कसरी के गर्ने भन्ने कुरा नै अन्योल थियो । म दोहोरी साँझहरुमा ग्राहक बनेर जान्थेँ, जुस पिउँदै बस्थेँ र अवसर पाए एक दुई वटा गीत गाउँथे । कति दोहोरी साँझमा बिना तलब पनि काम गरेँ । यसो गर्दागर्दै अभ्यास पनि राम्रो हुन थाल्यो र राम्रो गाउँन थालेँ । त्यसपछि दोहोरी साँझहरुले नै राम्रो जिम्मेवारी दिएर राख्न थाले । गीत गाउदै जाने क्रममा मैले एउटा गीीत एल्बम समेत निकालेको छु । अब छिट्टै अर्को एउटा एल्बमा आउदैछ । तर एल्बम निकाल्न भन्दा पनि बढी लाइभ दोहोरी नै गाउँछु ।
लोकगीतप्रतिको आम–धारणा कस्तो पाउनुभयो ?
–बीचमा कम मानिसले लोकगीत सुन्थे तर अहिले लोकगीत मन पराउने मानिस बढेका छन् । मानिसलाई आफूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै गीत सुन्छन्, त्यो उनीहरुको अधिकार पनि हो । तर लोकगीतले नेपालको मौलिकता र पहिचान झल्काउने भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर यसो भन्दैमा कसैलाई जबरजस्ती सुनाउने भन्ने कुरा हुँदैन । गायन क्षेत्रमा लागेपछि पूर्वी नेपालमा भन्दा पनि पश्चिममा बढी लोकगीत सुन्ने गाउने गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ । पछिल्लो समय युवावर्गमा पनि आफ्नो मौलिक संस्कार र संस्कृति जोगाउनु पर्छ भन्ने चेतना जागेको पाउँछु । त्यसैले नेपाली लोकगीतमा मौलिकताले पुनः स्थान पाउँदै गएको छ ।
लोकगीत र संगीतको प्रवद्र्धन र संरक्षण कसरी गर्न सकिएला ?
–लोकगीत संरक्षका लागि सर्जकदेखि स्रोता दर्शकसम्मको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा यहाँ पनि लागू गर्न सकिन्छ । हामीले हाम्रा अग्रजबाट सिक्यौँ भने हाम्रा भाइबहिनी, छोराछोरीलाई पनि हामीले सिक्ने वातावरण र अवसर दिनुपर्छ । पछिल्लो समय केही लोक गीत बाझाबाझ गर्ने, छाडा र अश्लील बन्दै गएका छन् । यो लोकगीत क्षेत्रमा भित्रिएको विकृति हो । यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ । लोकगीत भनेको त केटाकेटीदेखि बुढाबुढीसम्मले सुन्ने र मन पराउने लोकका गीत हुन् र हुनुपर्छ । लोक गीत,संगीतमा लाग्नेहरुले तत्कालीन लोकप्रियता वा फाइदा मात्र हेर्नुहुँदैन । भाइरल बन्न लोकगीतको मर्म र शैली बिगार्न कदापि पाइदैन ।
लोकगीत क्षेत्रका अवसर र चुनौती के कस्ता छन् ?
–राम्रो गर्न सके लोकगीत क्षेत्रमा अवसर पनि प्रशस्तै छन् । तर कसले कति मेहनत र दुख गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । दुख नगरि त कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन सकिँदैन । यस क्षेत्रमा चुनौती पनि उत्तिकै छ । गीत गाएर एउटा ज्यान पाल्न पनि मुस्किल पर्छ । शुरुमा यस क्षेत्रमा आउन र स्थापित हुन नै गाह्रो छ । तर निरन्तरताले जसलाई पनि गन्तव्यमा पुर्याउछ । ढिलो चाँडो मात्र हो ।
काठमाडौं । ‘मन पर्दैन’ बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । गायिका रचना रिमाल र
अस्मिता र नवराजको ‘घुम्तिमा रेल’ सार्वजनिक
काठमाडौं । गायिका अस्मिता अधिकारी र गायक नवराज कोलनीको स्वरमा नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ
इण्डियन आइडलका दाबेदार पवनदीपलाई कोरोना पोजेटिभ !
एजेन्सी । इण्डियन आइडलका दाबेदार पवनदीप राजनलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको समाचार सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका